Afhayeenka Ciidanka Booliska oo ka badbaaday Qaraxii Caawa ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 5 January 2021 5 January 2021
Qarax xooggan ayaa Caawa ka dhacay degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir, kaasoo si weyn looga maqlay xaafadaha Magaalada Muqdisho qaarkood.
Wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay wadada afisiyooni meel ku dhow dugsiga sare ee 21-ka Octoobar, sida noo sheegeen dad goobjoogayaal ah.
Gaari la sheegay inuu leeyahay Afhayeenka ciidanka Booliska oo wadada marayey ayaa lala beegsaday qaraxan oo loo adeegsaday miino wadada la dhigay.
Afhayeenka ciidanka Booliska ayay wararku sheegayaan inuusan la socon gaariga xiliga qaraxa lala beegsanayey, haweeney wadada mareysay ayaa la xaqiijiyey illaa hadda iney ku dhimatay qaraxa, iyadoo khasaaraha rasmiga ah aan weli la ogeyn.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay, isla markaana aaga xiray, sidoo kalena dad u diidaya inay maraan wadada, waxaana hakad ku jira isku socodka gaadiidka.